मौलिक हक र तिनका प्रकारहरु
राष्ट्रका नागरिकहरूलाई सो देशको संविधानले प्रदान गरेका हकनै मौलिक हक हुन् । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उल्लंघनमा सम्बन्धित देशले क्षतिपूर्ति सहित त्यस्तो हक प्राप्त गर्ने प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । मौलिक हक हनननमा संवैधानिक उपचार प्राप्त हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ को धारा १२ देखि ३२ सम्म २१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यी हकहरू यस प्रकार छन् ।
स्वतन्त्रताको हक धारा १२
समानताको हक	 धारा १३
छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक	 धारा १४
प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक धारा १५
वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा १६
शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक धारा १७
रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक धारा १८
सम्पत्तिको हक धारा १९
महिलाको हक धारा २०
सामाजिक न्यायको हक धारा २१
बालबालिकाको हक धारा २२
धर्मसम्बन्धी हक धारा २३
न्याय सम्बन्धी हक धारा २४
निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक धारा २५
यातना विरुद्धको हक धारा २६
सूचनाको हक धारा २७
गोपनीयताको हक धारा २८
शोषण विरुद्धको हक धारा २९
श्रम सम्बन्धी हक धारा ३०
देश निकाला विरुद्धको हक धारा ३१
संवैधानिक उपचारको हक धारा ३२
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३मा स्वतन्त्रताका हकहरु
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार सबै नागरिकलाई हुने स्वतन्त्रताका हकहरु
१) विचार र अभिव्यक्तिको स्वातन्त्रता
२) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता
३) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता
४) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता
५) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबस गर्ने स्वातन्त्रता
६) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वातन्त्रता
3 Career News and Info भाद्र १२, २०७४
4 टकिङ्ग शुज
5 वाणिज्यमा रिफरमिस वा रिफरविस केलाई भनिन्छ ?
7 को हुन् सिस्टर निर्मला ?
8 Career News and Info जेठ २३, २०७४
9 के हो ल्याण्डपुलिङ?